Vavolombelon’i Jehovah: Feno Fitopolo Taona Sahady ny Sekolin’i Gileada
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Armenianina (Andrefana) Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Chichewa Dangme Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Ga Grika Géorgien Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Nzema Ossète Ouzbek Pendjabi Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tarasque Tigrigna Tiorka Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Valencienne Xhosa Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Éwé
Nisy sekoly fampiofanana manokana natomboka tany New York tamin’ny 1 Febroary 1943. Antsoina hoe Sekoly Ara-baibolin’i Gileada izy io izao, ary lehilahy sy vehivavy 8 000 mahery avy any amin’ny tany samihafa no efa nahazo fampiofanana tamin’izy io.
Ambony: Fidirana mankao amin’ny Sekolin’i Gileada, any South Lansing, New York. Ambany: Mpampianatra miresaka amin’ny mpianatra tamin’ny kilasy faha-31
Hoy i Jonathan, izay nahazo diplaoma tamin’ny Sekolin’i Gileada vao haingana: “Miorina amin’ny Tenin’Andriamanitra ilay fampianarana azonay, ary hanampy anay hahita vokatra kokoa ilay izy na aiza na aiza tany hanendrena anay.” Hoy koa i Marnie vadiny: “Vao mainka aho lasa te hanampy ny olona hahita hoe tsy misy fomba fiaina tsara kokoa noho ilay nokasain’ny Mpamorona ho antsika. Mino tanteraka aho fa ho sambatra ny olona rehefa hampiana hahafantatra an’i Jehovah.”
Maharitra dimy volana ny Sekolin’i Gileada, tsy misy saram-pianarana, ary ny Baiboly no tena ianarana. Asongadina mandritra an’ilay sekoly hoe zava-dehibe ny fitoriana. Inona no tanjon’ilay fampianarana? Mba hahay hampahery sy hampiofana ny vahoakan’Andriamanitra ireo mpianatra, ary mba hanana ny toetra tsara ilainy hiatrehana zava-tsarotra. Iarahana midinika mandritra an’ilay fiofanana koa izay toro lalana ara-baiboly hanampy an’ireo mpianatra hifandray kokoa amin’i Jehovah Andriamanitra.
Efa mpanompo manontolo andro ny mpivady manao ny Sekolin’i Gileada. Mety haverina any amin’izay nanendrena azy teo aloha ihany izy ireo rehefa mahazo diplaoma, na hotendrena any an-tany hafa. Misy 90 mahery ny biraon’ny sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah, ary mety halefa hanompo any amin’ny iray amin’izy ireny ny sasany. Ny ankamaroany kosa alefa any amin’ny faritra be mponina, satria any izy ireo no afaka mampandroso bebe kokoa ny fitoriana.
Tany amin’ny Toeram-piompiana sy Fambolen’ilay Fanjakana any South Lansing, any New York, no natao ny Sekolin’i Gileada tamin’ny voalohany. Nafindra tany amin’ny foiben’ny Vavolombelon’i Jehovah any Brooklyn ilay izy tamin’ny 1961. Natao tany amin’ny Toeram-pambolena sy Fiompian’ny Vavolombelon’i Jehovah any Wallkill kosa ilay sekoly tamin’ny 1988 ka hatramin’ny 1995. Nafindra tany amin’ny Foibem-pampianaran’ny Tilikambo Fiambenana any Patterson ilay izy taorian’izay, ary mbola any hatramin’izao. Tamin’ny Martsa 2013 no natao ny fizarana diplaoman’ny kilasy faha-134.
Tena ohatra tsara ireo nahazo diplaoma tamin’ny Sekoly Ara-baibolin’i Gileada, nandritra izay 70 taona izay, satria tsy nivadika mihitsy fa nitory momba an’i Jehovah foana.